Ajụjụ - Shenzhen Ụtọ Technology Co., Ltd.
Uzo Ikanam Screen
Uzo Ikanam Poster
Creative Ikanam Screen
Uzo Ikanam posta
Akwụkwọ ikike / Service
LCD vs Direct View Ikanam Video Walls: Gịnị Ị Mkpa Ịmata
Ọ bụrụ na ị na-na na na ahịa a anya usoro, na eleghị anya, chọpụtara na video mgbidi ngosipụta abịa na a na-agbagwoju anya nso nke shapes, nha, na teknụzụ. Ị nwekwara ike chọpụtara na ọtụtụ na-emepụta na-eji aha dị iche iche maka otu teknụzụ na-eme ka ndị na-emegiderịta ekwu banyere nke technology anamde kasị mma.
O kwere nghọta na nke a nwere ike ịmepụta a otutu mgbagwoju anya n'ihi na ndị na-azụ. N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, otu onye na-uche nke aghara bụ ihe dị iche n'etiti abụọ na-ewu ewu ngosi ụdị: "LCD" (mgbe ụfọdụ a na-akpọ "Ada-LCD") na "ikanam" (mgbe ụfọdụ a na-akpọ "Direct View ikanam"). Ezie na ha nwere ike ịda yiri, LCD na Direct View ikanam bụ abụọ dị iche ngosi teknụzụ na ha nwere ihe pụrụ iche atụmatụ na uru. Ya mere, olee ndị uru? Olee otú ha dị iche? Ọ bụrụ na ị na-adọga zaa ajụjụ ndị a, anyị na-na-na na a na-enyere!
Gịnị bụ LCD?
LCD (mmiri mmiri crystal ngosi) bụ a ewepụghị panel ngosi ụdị na kemgbe na-ewu ewu maka afọ ma video mgbidi na n'ji ngwá electronic ahịa. Ohere inweta bụ, ị na-ama iji LCD technology ọtụtụ ugboro n'ụbọchị - na ọ bụ ngosi ụdị-eji na kasị smartphones, kọmputa Monitors, na telivishọn na ákwà.
LCD ogwe na-ekewet nke a oyi akwa nke mmiri mmiri crystal sandwiched n'etiti abụọ iberibe ekewasị iko. Liquid crystal bụ a umi na aga dị ka a mmiri mmiri ma nwere ụmụ irighiri na ike ga-agba mbọ ka kristal. Mgbe ihe eletrik na-etinyere na mmiri mmiri kristal, na kristal ịgbanwee, ikwe ìhè gabiga ịmepụta otu image. Liquid kristal adịghị emepụta ha ìhè, nke mere backlights mere ndokwa n'azụ iko na ìhè ngosi. LEDs (ìhè-emitting diodes) bụ kasị ụdị backlight eji taa, na ụfọdụ na-emepụta n'ahịa ha Ikanam-backlit LCDs dị ka "Ada-LCD."
Uru nke LCD
LCDs na-egbuke egbuke, oké ọnụ, a pụrụ ịdabere na, na-enye magburu onwe visual arụmọrụ. LCD bụ nnọọ elu-mkpebi technology, otú LCD video mgbidi pụrụ igosipụta ederede, oyiyi, na video na nkọ zuru ezu. Ndị a uru ka LCDs a oké nhọrọ maka a nso nke video mgbidi ngwa, si agha ụlọ na mahadum research emmepe.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke LCD
Mgbe LCDs na-tiled ọnụ ike a video mgbidi, bezels (ma ọ bụ seams) bụ anya n'etiti onye ogwe. Nke a nwere ike hụrụ dị ka a mwepu mgbe atụnyere LCD na enweghị nkebi ngosi ụdị dị ka Direct View ikanam. Otú ọ dị, Nsukka-eme bezel-obosara na bụla ọgbọ ọhụrụ nke na-egosiputa, otú ị ga-ahụ na bezels ọhụrụ LCDs bụ ihe na-anaghị achọpụta.
Direct View ikanam
Dị ka LCD, Direct View ikanam (mgbe ụfọdụ dị nnọọ akpọ "ikanam") bụ a ewepụghị-panel ngosi ụdị metụtara na ojiji nke ìhè-emitting diodes (LEDs). Otú ọ dị, Direct View ikanam-arụ ọrụ nke dị iche iche site na LCD. Na a Direct View Ikanam ngosi, ọtụtụ narị obere LEDs na-n'ịnyịnya na na a panel, na ọ dịghị mmiri mmiri crystal ma ọ bụ ekewasị iko na-eji. Kama na-eje ozi dị ka a backlight (dị ka ha na-eme na LCD ngosipụta), na LEDs na Direct View Ikanam ngosipụta emepụta ihe oyiyi onwe ha. Onye ọ bụla ikanam bụ nnoo a obere bọlb na-ewepụtarịrị acha ìhè mgbe a akpan akpan voltaji na-etinyere ya. Ụyọkọ nke red, green, na-acha anụnụ anụnụ LEDs na-grouped na panel, na-eke ndị na-agba pikselụ mkpa iji mepụta ihe oyiyi.
Direct View ikanam bụ ozugbo a ala-mkpebi ngosi ụdị eji tumadi na ibu n'èzí ngosipụta, ma mmepe nke nta LEDs na-adịbeghị anya mere ka nnọọ elu amuma kwere omume. Ndị a na-adịbeghị anya ọganihu mere Direct View Ikanam na-akpali akpali ọhụrụ nhọrọ maka ime ụlọ video mgbidi.
Uru nke ikanam
Direct View Ikanam ogwe enweghị bezels, ya mere ha nwere ike tiled ọnụ na-etolite a kpamkpam enweghị nkebi video mgbidi . Ikanam ngosipụta nwekwara nnọọ na-egbuke egbuke, pụrụ ịtụkwasị obi, ume-oru oma, na-enwe ndị kasị mma na agba ziri ezi na ume udu nke ọ bụla ngosi ụdị dị taa. Àgwà ndị a ka Direct View Ikanam ihe magburu onwe oke maka nnukwu-ọnụ ọgụgụ digital signage na ndị ọzọ na ngwa na-achọ elu-mmetụta visuals.
Ụkọ ihe ụfọdụ nke ikanam
Ọ bụ ezie na ahịa na-atụ anya ka ibelata na-abịa abịa afọ, elu-mkpebi Ikanam mgbidi nwere ugbu a na ọtụtụ ugboro ọzọ dị oké ọnụ karịa LCDs, otú a technology ka nke iru maka ọtụtụ ahịa. Ke adianade do, ọbụna ndị kasị elu-mkpebi Ikanam ngosipụta ka ike nye ultra-elu amuma dị site LCD. Maka ojiji-ikpe nke na-achọ anya ka kasị mma nkọwa, LCD ngosipụta nwere ike ka na-họọrọ.
Anyị na-atụ na anyị na-na na nyeere ẹduọk ụfọdụ ìhè na ihe dị iche na - na nkịtị uru - of LCD na Direct View Ikanam video mgbidi. Mee elu mee ala, ha abụọ bụ ndị magburu onwe ngosi teknụzụ, na na gị kpọmkwem na ngwa ma mmefu ego nwere ike ikpebi ihe kasị mma nhọrọ maka gị.